Mazana eVakadzivirirwa Vanhu Vachipatara MuUK neDelta
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » Mazana eVakadzivirirwa Vanhu Vachipatara MuUK neDelta
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Nyanzvi dzinoyambira kuti 'majekiseni ekudzivirira haabvise njodzi dzese' yeiyo inopararira yeDelta musiyano iyo ikozvino inoverengera 99 muzana yezvirwere zvese zveECVID-19 muUK.
Pane zviratidzo zvekutanga zvekuti jabs haigone kumisa kutapurirana kweDelta.
Mishonga yose inoshandiswa muUK inoda vanogashira kuti vagamuchire miviri miviri kuti vanyurwe zvizere.
Vangaita makumi manomwe neshanu muzana muzana yevakura veUK vagari vakagamuchira maviri mapfuti kusvika zvino.
Mune yazvino coronavirus yekuvandudza, Public Health England (PHE) yakayambira nezve kutanga kuratidza kuti vanhu vakabaiwa jekiseni vanokwanisa kuendesa iyo Delta musiyano we COVID-19 zviri nyore sevaya vasina kumbogamuchira pfuti.
Sekureva kwekuburitswa kwePHE, mazana evanhu vakabaiwa jekiseni muUK vakavharirwa muchipatara nemhando inopararira yeDelta COVID-19.
Kubva munaChikunguru 19 kusvika Nyamavhuvhu 2, 55.1% yevanhu 1,467 vakaiswa muchipatara neDelta musiyano vaive vasina kubatira, PHE yakati, nepo 34.9% - kana vanhu 512 - vanga vagamuchira madosi maviri.
Chikunguru 19 raive iro zuva iro iro rekudzivirirwa kwekukiya kwakadzikiswa zvakanyanya muUK.
Mishonga yose yekudzivirira iri kushandiswa muUnited Kingdom - iya inogadzirwa neAstraZeneca, Moderna nePfizer-BioNTech - inoda vanogashira kuti vagamuchire madosi maviri kuti vanyurwe zvizere.
"Sezvo huwandu hwevanhu hwunowana jekiseni, tichaona yakakwira hama muzana yevakabayiwa muchipatara," akadaro PHE.
Jenny Harries, mukuru mukuru weUK Health Security Agency, akati zviyero zvekuchengetwa muchipatara zvakaratidza "zvakare kukosha kwazvo kuti isu tese tibude kuzogamuchira mibairo yemushonga nekukurumidza patinokwanisa".
Felix Harrington anoti:
Nyamavhuvhu 10, 2021 pa14: 23
Mishonga yekunyepedzera yekunyepedzera COVID-19 majekiseni haapi hutachiona kana kudzivirira chero munhu kuti asatapurirane, asi anokonzeresa zvakakomba zvakasanganisira kufa, uye anotanga masimba ezvirwere zvemuviri kuti anyanye kubatira hutachiona sezvatiri kuona. Ivo chete vasina kubayiwa neimwe yeidzi mishonga yekunyepedzera vanogona ikozvino kuzvidzivirira.
Nyamavhuvhu 8, 2021 pa06: 08
Nigrdom, ndizvozvo here?
Gerard Wirth anoti:
Nyamavhuvhu 7, 2021 pa20: 41
Nhamba dzepasi rose hadzi tsigire vanhu vatora Astra Zeneca… mishumo yakadaro inofanira kuratidza huwandu hweavo vakatora mushonga umwe neumwe zvakasiyana uye zvakasiyana pikicha yakadzidziswa.
IZVOZVI .. .. kubayiwa jekiseni hakukwanise kukanda nhanho dzese dze anti-covid nepahwindo…. unofanira kuenderera mberi nekushandisa chifukidzo ... .kana vanhu vakushanyira kunyangwe vakabaiwa jekiseni rekuzviputira uye unodzivirira kuswedera padyo nemuviri. Zvinogona kutsamwisa munhu wese asi izvi zvinobatsira. Zano rakanakisa dont enda kumisangano mikuru mamwe 'masiki-mashoma'… pfeka pazvifambiso zveruzhinji… .. muhofisi kana kushanda zvakafanana.
Paul Hudson anoti:
Nyamavhuvhu 7, 2021 pa20: 00
Hongu asi chiyero chekufa ndechei? Inodiwa yemamiriro. Kana vakabaiwa vanhu vakatapukirwa asi vashoma muzana vakafa kana vachida kurapwa, panguva ipi iyo Covid inova yakafanana neyakajairika furuu?